များစွာသောအရေအတွက်ရှိပါတယ် တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာဒီနေ့သူတို့ထဲကတချို့ဟာတခြားသူတွေထက်ပိုသိကြတယ်၊ ကုမ္ပဏီများမှ မဟုတ်ဘဲနေရာချထားနှင့်နိုင်ငံခြားသားများ၏အခြားအုပ်စုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူကိုအခြားသူများ။ ဤအရာအများစုဟာ အော်ပရေတာများ ၎င်းတို့သည်စျေးကွက်တွင်ကောင်းစွာနေရာချထားခံရပြီးအချို့မှာအချို့နိုင်ငံများရှိအချို့နိုင်ငံများနှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိအသွားအလာခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဒီအာကာသထဲမှာသက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ရှာနိုင်သည် တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ ငါတို့တွေ့နိုင်တာကသူတို့နှုန်းထားနဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုသိဖို့ဟာဘယ်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။
အောက်တွင်သင့်အနေဖြင့်အဓိကမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ (Movistar, Orange, Vodafone, Amena စသည်) နှင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့မှသာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအသစ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဈေးချိုသည်။ အထူးလျှော့စျေးကိုရယူပြီးဤကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူစျေးသက်သာသောမိုဘိုင်းကိုရယူပါ။
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
၂၀၂၀ သည်စပိန်နိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံအချို့တွင် 2020G လွှမ်းခြုံမှုသည်အမှန်တကယ်စတင်လာမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းဒေတာရှိသည်ဖို့ APN ကို configure လုပ်နည်း
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
APN (Access Point Name) သည်ယနေ့သတ်မှတ်ထားသော Access Point တစ်ခု၏အမည်ဖြစ်သည်။
Vodafone သည် 5G roaming ကိုဥရောပရှိမြို့ကြီး ၅၅ သို့သယ်ဆောင်လာသည်
por အက်ဒါဖာရီနို လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
Vodafone သည်ဥရောပရှိနိုင်ငံများစွာတွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ 5G ဖြန့်ကျက်သောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ယခုအပတ် Vodafone လက်ဖြင့် 5G ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသည်
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Vodafone သည်ယခုနွေရာသီတွင်ဥရောပသို့ 5G တင်ပို့ရန်စီစဉ်နေကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်
တောင်ကိုရီးယား၌ 1G သုံးစွဲသူတစ်သန်းနီးပါးရှိပြီးဖြစ်သည်
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
စီးပွားဖြစ် 5G ကွန်ယက်ကိုပထမဆုံးဖွင့်လှစ်သောနိုင်ငံသည်Aprilပြီလတွင်တောင်ကိုရီးယားဖြစ်သည်။ လက်မှတ်ပေါင်း ...
Vodafone သည်အီတလီရှိမြို့ငါးမြို့တွင် 5G ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်
5G ကွန်ယက်စနစ်များသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအထိတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ တောင်ကိုရီးယား၊ အင်္ဂလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့်စတိတ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများ ...
Nokia သည် Huawei ၏အားနည်းချက်ကိုအသုံးချပြီး 5G တွင်တိုးချဲ့ရန်
အဆိုပါပြproblemsနာများ Huawei အဘို့အကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်သောတရုတ်ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ရောင်းအားကိုကြည့်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကဥရောပသမဂ္ဂ၌ roaming သည်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ပထမအဆင့်
ယခုနွေရာသီတွင် Vodafone သည်ဥရောပသို့ 5G တင်ပို့ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
အချို့သောနိုင်ငံများသည်တစ်လကျော်အတွင်းအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်သော 5G ကွန်ယက်တစ်ခုရှိကြသည်။ တောင်ကိုရီးယားသည်
por အက်ဒါဖာရီနို လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
အမျိုးသားရဲနှင့်လိမ္မော်ရောင်သည် # PorunusoLovedelatecnologíaဟုခေါ်သည့်ဤအစီအစဉ်အသစ်ကိုစတင်သည့်ပါတီနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသိတယ်…
Google Fi - ဂူဂဲလ်ရဲ့အော်ပရေတာကဥရောပကိုဝင်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်
လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်က Google သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အော်ပရေတာကိုအမေရိကန်၌ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါဟာကုမ္ပဏီတစ်လမ်းအတွက်လုပ်ခဲ့တယ်တစ်ခုခု ...
Pepephone မှ 200 Mb Fiber Rate ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရယူပါ
ဤရွေ့ကား Orange နှင့်အတူ iPhone အသစ်၏စျေးနှုန်းများဖြစ်ကြသည်
Pepephone ရဲ့ဖိုင်ဘာကသင့်ကိုနှစ်ဆ Mb ပေးတယ်
Pepephone Inimitable Trio နှုန်းသည်ယခုလျှော့စျေးဖြင့်ဖြစ်သည်
Yoigo's Endless rate ဖြင့် Galaxy S8 + ကိုရောင်းပါ
RepúblicaMóvilမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 1GB အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဒေတာ
Jazztel ၏ 50Mb အချိုးကျသောအမျှင်ကိုယခုရောင်းနေပြီ
Movistar ၏ ၅၀ MB MB Fiber Optic Rate ကိုတိုးမြှင့်လိုက်သည်
Yoigo က Galaxy S8 ကိုယူရို ၃၀၀ နဲ့ချွေတာပေးတယ်
ဒါတွေဟာMásMóvilရဲ့ Black Friday သဘောတူညီချက်ပါ
သင်၏စမတ်ဖုန်းကို Yoigo ၏ Black Friday ဖြင့်အသစ်တင်ပါ
Freedompop 4G အခမဲ့နှုန်းထားကိုဘယ်လိုစာချုပ်ချုပ်မလဲ၊ သင်ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ရင် SIM ပြောင်းလဲမှုကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမလဲ
Yoigo ၏အမြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်လှည့်ကွက်။ (800 Mhz နှင့် 2600 Mhz band များရရှိသည်) ။ ဗွီဒီယိုကြည့်ဖို့ရိုက်ထည့်ပါ
Ya Voy de Movistar မှစာရင်းသွင်းပြီးမည်သို့သေရမည်နည်း
အဓိကစပိန် APN များစာရင်း